Faahfaahino Qarax Lagu Weeraray Hotelka NASA-HABLOOD2 – STAR FM SOMALIA
Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayaa lagu weraray hotelka Naasa hablood 2 ee dagmada xamarweyne ee gobolka banaadir halkaas oo ka dhashay qasaaro iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ka agdhawaa halka uu werarka ka dhacay.
Goobjoogyaal Starfm Uga waramay qaraxaas ayaa inoo sheegay in qaraxa kadib lamaqlay rasaas xoogan oo larumaysan yahay inay isweedaarsadeen koox hubaysan oo gudaha uga shay Hotelka iyo ilaalada hotelka taasi oo sii kordhisay qasaaraha werarkaas.
goobjoogaha oo codsaday inaan magaciisa labaahinin ayaa inoo shegay in werarka ay ku dhinteen ugu yaraan todobo qofood oo iskugu jira ilaalada Hotelka, kooxdii werarka ka dambeysay iyo dad shacab ah oo ku sugnaa gudaha Hotelka Nasa hablood 2 ee magalada Muqdisho.
dhanka kale qarax labaad ayaa lagu soowarameyaa inuu ka dhacay meel ku dhaw taalada Dal jirka Daahsoon ee magalada muqdisho
Qaraxaan labaad ayaa ahaa gaari nooca Raaxada ah oo ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa kaas oo yaalla agagaarka Taalada Daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere.
Gaarigaan ayaa ahaa mid markii uu qarixii hore dhacay Goobta la soo dhigay dadkana ay ka shakisnaayeen.